तनाव कम गर्नका लागि १० तर तरिका र कायाकल्प गर्नुहोस् - तनावको
तनाव कम गर्नका लागि १० तर तरिका र कायाकल्प गर्नुहोस्
10 Ways Reduce Stress
तनाव हाम्रो दिनको एक सामान्य तत्व भएको छ। आजको संसार छिटो छ र यसको साथमा थकाइलाग्दो छ। त्यसो भए, हरेक पटक एकै पटकमा, आवश्यक ब्रेक लिएर बटनहरू स्विच अफ गर्दै रिफ्रेस गर्न र पुन: जीवन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन तपाईं तनावग्रस्त हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँ तनावका कारण छन्। के तनावले तपाईंलाई पछि समातेको छ? यदि यो छ भने, यो सबै भन्दा राम्रो स्विच गर्न सही समय हो र तपाईंको दिमागलाई सुन्न गर्नुहोस्। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो तनाव कम गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नै लागि कमजोर बनाउने बनाउन सक्नुहुन्छ:
१ तनाव बस्टर: सास
दुई तनाव बस्ने: केही गम चाउनुहोस्
3 तनाव बस्ने: संगठित
चार तनाव बस्टर: व्यायाम
।। तनाव बुस्टर: राम्रो खानुहोस्!
। तनाव बस्ने: सँधै आफ्नो निन्द्रामा समात्नुहोस्
।। तनाव बुस्टर: के त्यहाँ कुनै कमीहरू छन्?
।। तनाव बस्टर: क्याफिन कर्ब
9 स्ट्रेस बस्टर: माइन्डफुल खाने पर ध्यान दिनुहोस्
१० तनाव बस्ने: एक शौक खोज्नुहोस्!
तनाव बस्टर १: सास
यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ तत्काल तनाव राहत , तपाई जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट एक कदम टाढा जानुहोस्, आफैलाई एक वा दुई लामो सास फेर्न दिनुहोस्। तनाव हार्मोनहरूले श्वासप्रश्वास र हृदय प्रणालीमा असर गर्दछ। तनाव प्रतिक्रियाको बखत, शरीर द्रुत सास लिन वातानुकूलित छ तपाईंको शरीरमा अक्सिजन युक्त रगत चाँडै वितरण गर्न प्रयासमा। दम वा चिन्ता जस्ता पूर्व अवस्थित स्थितिले यसलाई झनै नराम्रो बनाउन सक्छ। ती दुई मिनेट लामो सासको लागि, तपाइँको ध्यान सबै तनाव बाट सास फेर्न कोशिस गर्नुहोस्। औंठाको राम्रो नियम भनेको चार को गणनाको लागि सास लिनु हो, १ वा २ को लागी समात्नुहोस् र then का लागि जारी गर्नुहोस्।
सुझाव: पन्ध्र मिनेट को हरेक बिहान ध्यान काम भन्दा पहिले र हरेक रात काम पछि तपाईंलाई आफ्नो विचारहरू फोकस गर्न र दिमाग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
तनाव बस्टर २: केहि गम चाउनुहोस्
तुरन्तै कम तनाव महसुस गर्ने अर्को तरिका । स्वीन्बर्न युनिभर्सिटि २०० 2008 मा गरिएको एक अध्ययनले पत्ता लगायो कि गम चर्ने जो मानिस तनावमा रहेको मल्टीटास्किंगमा कम कोर्टीसोल स्तर, तनाव र चिन्ताको स्तर कम, र सतर्कता र प्रदर्शनको स्तर वृद्धि भएको थियो। अर्को २०० study मा अध्ययनप्राकृतिक औषधि र न्यूरोकग्निशन, अष्ट्रेलियाको अध्ययन को लागी NICM सहयोगी केन्द्रफेला पार्यो कि च्युइंग गमले नकारात्मक मुडलाई सुधार गर्न सक्छ, र शान्ति र शान्तिको स्तर बढाउन सक्छ। च्युइंग गमले दिमागका तरंगहरूलाई आराम प्रदान गर्दछ। च्युइंग गमले तपाईंको मस्तिष्कमा रगत प्रवाहलाई पनि बढावा दिन्छ।
टिप : जब तपाईं चिन्तित महसुस गर्दै हुनुहुन्छको लागि एउटा टस गर्नुहोस्। यसलाई बानी नगर्नुहोस् वा यससँग घण्टा सम्म चबानुहोस् - यसले तपाईंको दाँत क्षतिग्रस्त पार्छ, अन्य साइड इफेक्टको बीचमा पारा जारी गर्दछ।
तनाव बस्टर:: संगठित गर्नुहोस्
यदि तपाईंको तनाव भावको भावनाबाट आउँदैछ भने, एक दोस्रोको लागि पज गर्नुहोस् तपाईंको लागि पछ्याउन कार्यको एक दिगो योजना बनाउनुहोस्। आफुलाई तनावबाट छुटकारा दिनुहोला कि केहि चीज कसरी जान्ने भन्ने बारे थाहा नपाउँदा आउँदछ र जब तपाईंलाई आवश्यक परेको बेला फेला पार्न सक्षम हुनुहुन्न। यो छ सुरु गर्न सँधै राम्रो हुन्छ कार्यतालिका सूचिको साथ लामो दिन र अझ राम्रो यो सुनिश्चित गर्न तपाई सफा वातावरणमा काम गर्नुहुन्छ भनेर, डेस्कमा, उदाहरणका लागि, जहाँ सबै कुरा ठीक ठाउँमा हुन्छ, तपाईंको खाना तयार हुन्छ जब यो खाने समय हुन्छ, इत्यादि।
सुझाव: यदि तपाइँ सामानहरू व्यवस्थित र पुन: व्यवस्थित गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँको कोठाको केहि अंशहरू अनावृत हुने बेलामा राख्न सक्नुहुन्छ। वा, फेरि पूरै कोठा फेरि गर्नुहोस् - जब सम्म यो तपाईं शान्त हुन्छ।
तनाव बस्टर:: व्यायाम
यो तपाईले सुन्न चाहानु भएको कुरा नहुन सक्छ, तर नियमित व्यायाम (हप्तामा times पटक अर्ध-कठोर आन्दोलनको कम्तिमा minutes० मिनेट परिभाषित) राम्रो मुड र नक्कल गर्ने क्षमतासँग सिधा जोडिएको छ। व्यायामले शरीरको हार्मोनहरू पनि नियमित गर्दछ, जबकि यसले शरीरको तनाव हार्मोनको स्तर कम गर्दछ, जस्तै एड्रेनालाईन र कोर्टिसोल, यसले मस्तिष्कमा एन्डोरफिन, रसायनको उत्पादन पनि उत्प्रेरित गर्दछ जुन दुबै छोटो छ। - र तनाव घटाउने मा दीर्घकालीन असर।
तनाव बस्टर:: राम्रो खानुहोस्!
यो होइन कि तपाईंले आफैंको सबै कुरा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ र केही प्रभावकारीको आहारलाई टीमा पछ्याउनु भयो, राम्रोसँग खानु भनेको पक्कै स्वस्थ विकल्पहरू छनौट गर्नु हो र कबाडी कम गर्नु हो। प्रत्येक पटक एक चोटि, मिठाईको लागि फल खानु , तपाईको कार्बोनेटेड पेयलाई एक कप चियाको लागि बदल्नुहोस्, र त्यस्ता साना परिवर्तनहरू र विकल्पहरू।
एक स्वस्थ आहार खाने आफ्नो शरीर मा तनाव को नकारात्मक प्रभावहरु लाई कम गर्न सक्छन्, एक मजबूत प्रतिरक्षा र स्नायु प्रणाली निर्माण, कि तनाव सामना गर्न बढी सुसज्जित छ। जब तपाईले सागपात खाई रहनु हुन्छ भने हर्मोनहरू पनि उत्तम हुन्छ।
याद गर्नुहोस्, धेरै कडा खाना पनि तनावको लागि योगदानकर्ता बन्न सक्छ, यो कहिलेकाँही चाहनालाई पूर्ण रूपमा ठीक हुन्छ, मात्र सन्तुलनलाई थाहा छ।
टिप : स्वस्थ खाने र दायाँ खान सबैभन्दा बढी दुई हुन् तपाईंको स्वास्थ्य, दिमाग र शरीरलाई नियालेर राख्नुको लागि महत्वपूर्ण कारकहरू जिम्मेवार छन्।
स्ट्रेस बस्टर:: सधैं तपाईंको निन्द्रामा समात्नुहोस्
तनाव र निन्द्रा उनीहरूको भन्दा बढी निकटसँग जोडिएका छन्। तनावले निद्राको गुणस्तर र अवधिमा प्रतिकूल असर गर्न सक्छ, जबकि निद्राको अभावले तनावको स्तर बढाउन सक्छ। दुबै तनाव र निन्द्राको अभावले दिगो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। एक पटक तपाईंसँग गुणस्तरीय निद्राको मात्रा छ जुन तपाईंको शरीरलाई आवश्यक हुन्छ, मस्तिष्क र यसले नियन्त्रण गर्ने प्रणालीहरूले अझ राम्रोसँग कार्य गर्न सक्षम छन्, राम्रो दक्षता सुनिश्चित गर्दछ र त्यसैले हाम्रो तनाव कम गर्दछ। सुत्नेको लागि निश्चित विन्डो एउटा राम्रो तरिका हो यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईं ध्वनी, गुणस्तरको निद्राको साथ छिटो निदाउनुहुनेछ।
स्ट्रेस बस्टर:: के त्यहाँ कुनै कमी छ?
यदि तपाइँ आफैंमा निरन्तर तनाव वा फुलिएको पाउनुभयो भने, आफ्नो रगत परीक्षण गर्नुहोस्। तनावले म्याग्नेशियम र फलामको द्रुत पोषणलाई कम गर्दछ र पोषक तत्त्वहरू कम गर्दछ तनावको तीव्र भावना निम्त्याउन सक्छ, यो एक कुटिल चक्र हो! उदाहरणका लागि, भिट बीको अभाव एकदम सामान्य छ, भारतमा मात्र प्रतिवर्ष १ सीआर घटनाहरू। थकान र अस्थिर स्मृतिको लक्षण निराशाजनक, अनुत्पादक हुन सक्छ र तपाईंको चिन्तामा थप्न सक्छ। पूरक आहार सुरू गर्ने बारेमा तपाईंको चिकित्सकसँग कुरा गर्ने विचार गर्नुहोस्, जसमध्ये धेरै तनाव कम गर्नका साथै चिन्ता कम गर्न पनि सक्छ।
टिप : आफ्नो स्वास्थ्य चार्टमा अप-टु-डेट रहनको लागि आफैलाई नियमित कमी र अन्य सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थाहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्।
तनाव बस्टर:: क्याफिन कर्ब गर्नुहोस्
कफीले तपाईंलाई बिहान चाहिने झटका दिन सक्दछ, यो तनावको लागि योगदानकर्ता पनि हुन सक्छ। उत्तेजक क्याफिन र तनाव दुबै कोर्तिसोल स्तर बढाउन सक्छ। क्याफिनको उच्च मात्राले कोर्टीसोलको लामो उचाई स्तरसँग सम्बन्धित नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ (जस्तो कि तनावमा)। तपाईको शरीरमा यसको घिमिरे प्रभावहरू डरलाग्दो घटनाहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। नियमन महत्वपूर्ण छ र कुनै पनि अधिक पाँच कप एक दिन अत्यधिक हो। मदिरा र निकोटीन कन्पासप्शनहरू पनि निगरानीको कुरा हो। प्रकृतिमा उदासीनताहरूले तनाव सहित नकारात्मक मुड र भावनाहरू बढाउन सक्छन्।
टिप : प्रशस्त मात्रामा कफी पिउनु उनीहरूले टिभीमा देखाए जस्तो मनमोहक हुँदैन। तपाईंको कफीको सेवन प्रति दिन दुई वा तीन कप प्रतिबन्धित गर्नुहोस्।
तनाव बस्टर:: माइन्डफुल खाने पर ध्यान दिनुहोस्
तपाईंले पहिले यो सुन्नुभयो, रोकथाम उपचार भन्दा राम्रो छ। थाहा पाउनुहोस् तपाईको प्लेटमा तपाईसँग के छ र यसको लागि योजना बनाउनुहोस् जसबाट तपाईलाई कम्तिमा तनाव हुन्छ, यदि यसले प्रमुख तनाव उत्पन्न गर्न बाँकी नै छ भने, मूल्यमा मूल्यको मूल्या evalu्कन गर्नुहोस्, त्यसले निम्त्याउने दबाबको लायक छ? सबै तनाव तपाईको नियन्त्रणमा हुँदैन, तर केहि हुन्। तपाईंको जीवनका अंशहरू लिनुहोस् जुन तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र यसले तपाईंलाई तनाव गराइरहेको छ। जे बाँकी रहन्छ, समयमै पर्याप्त हुनको लागि जान्नुहोस्, ढिलाइले तपाईंलाई थोरै समय मात्र छोड्नेछ र तपाईं सक्रियको सट्टा प्रतिक्रियावादी हुनुपर्नेछ, तपाईंको उत्तम कार्य गर्न सक्षम हुनुहुन्न।
टिप : च्यु गल्दैन!
तनाव बस्टर १०: एक शौक खोज्नुहोस्!
जब तपाइँलाई थाहा हुन्छ कि तपाइँसँग अगाडि एक प्रमुख, अपरिहार्य तनाव छ, यो एक शौक पाउन बुद्धिमानी हुन्छ यसले तपाईंलाई हावामा मद्दत गर्न सक्छ भाप बन्द। एउटाको समय तालिकामा उत्तरदायित्व रहित समय प्रदान गर्नु अगाडि हेर्ने कुरा हुन सक्छ। तपाईंले छनौटमा निर्भर गर्दै, सोख राख्नुमा धेरै थप लाभहरू हुन सक्छन् सुधारिएको मोटर कौशल, तीव्र मेमोरी र राम्रो निद्रा जस्ता। केवल केहि छनौट गर्न सम्झनुहोस् जुन तपाईं वास्तविक रूपमा रमाईलो गर्नुहुन्छ र आकर्षक र अर्थपूर्ण पाउनुहुनेछ।
Q. के सास फेर्न व्यायामले मद्दत गर्न सक्छ?
TO तत्काल, केहि द्रुत ग्राउन्डिंग व्यायाम गर्न सक्छन् चाल गर । लामो दौडमा, गहिरो सास फेर्ने अभ्यास जस्तै पेटको सास फेर्दा -15-१-15 मिनेट दिनको लागि अन्य रोगहरूको साथसाथै तनावको पनि सामना गर्न सक्छ।
Q. केहि पनि काम गरेको जस्तो लाग्दैन भने?
TO परिस्थितिबाट आफूलाई निकाल्नुहोस्, लामो पैदल यात्रा गर्नुहोस्, प्राथमिकताका ठाउँमा हरियाली छ र तपाईं आफैले केही अक्सिजन पाउन सक्नुहुन्छ, केही हरियो चिया पिउन वा प्रियजनलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं फिर्ती नगरी तपाईंसँग हातमा जे छ त्योसँग डिल गर्न राम्रो तयार महसुस भएको खण्डमा मात्र फर्कनुहोस्।
Q. कसरी तपाइँ एक तनाव चिन्नुहुन्छ?
TO सामान्यतया, डर वा ओइलोको भावना बताउने कथा संकेत हो कि केहि तपाइँलाई चिन्तित तुल्याउँदैन। यदि एक तनाव तपाईको लागि कडा हो भने, तपाइँको शरीर पनि जिटर, फिजेट वा दुखाई को फर्म मा यो गर्न को लागी प्रतिक्रियाहरु हुन सक्छ। यो पनि तपाईलाई कस्तो लाग्छ जब तपाइँ यस स्पष्ट तनावबाट टाढा हुनुहुन्छ। के सबै लक्षणहरू टाढा जान्छन् वा तिनीहरू अरू केहि कारणले गरिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: #DeStress: यहाँ आफुलाई घरमा आराम गर्न W तरिकाहरू छन्
बिभिन्न आसनहरू र उनीहरूका फाइदाहरू
कसरी प्राकृतिक रूप बाट कपाल बचत गर्न
कपालको विकासको लागि प्राकृतिक उपचार
कसरी प्राकृतिक कपाल रोक्न को लागी
पेट कम गर्न सरल व्यायाम